Jeremiya 23 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
23 “Vane nhamo vafudzi vari kuparadza nokuparadzira makwai emafuro angu!”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 2 Naizvozvo zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri pamusoro pevafudzi vari kufudza vanhu vangu: “Imi makaparadzira makwai angu; makaramba muchiaparadzira, uye hamuna kufunga nezvawo.”+ “Tarirai ndiri kufunga nezvenyu nokuda kwokuipa kwezvamakaita,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 3 “Ini ndichaunganidza makwai angu akasara kubva kunyika dzose dzandakanga ndaaparadzira kwadziri,+ ndichaadzosa kumafuro awo,+ uye iwo achabereka owanda.+ 4 Ndichaamutsira vafudzi vachaafudza;+ haazotyizve, uyewo haazombovhundutswi,+ uye hapana richashayikwa,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 5 “Tarira! Mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “andichamutsira Dhavhidhi nhungirwa yakarurama.+ Mambo achatonga+ oita nokungwara uye oruramisira nokuita zvakarurama munyika yacho.+ 6 Pamazuva ake Judha achaponeswa,+ uye Israeri achagara akachengeteka.+ Iri ndiro zita rake raachashevedzwa naro, Jehovha Ndiye Kururama Kwedu.”+ 7 “Naizvozvo, tarira! mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “avasingazotizve, ‘NaJehovha mupenyu akabudisa vanakomana vaIsraeri munyika yeIjipiti,’+ 8 asi, ‘NaJehovha mupenyu akabudisa, akaunza vana veimba yaIsraeri kubva kunyika yokuchamhembe nokunyika dzose dzandakanga ndavaparadzira kwadziri,’ uye ivo vachagara panyika yavo.”+ 9 Mwoyo wangu wange uchirwadziwa kwazvo mukati mangu pamusoro pevaprofita vacho. Mapfupa angu ose atanga kudedera. Ndava somurume akadhakwa,+ somurume akurirwa newaini, nokuda kwaJehovha uye nokuda kwemashoko ake matsvene. 10 Nokuti nyika yazara nemhombwe.+ Nokuti nyika iri kuchema nokuda kwokutukwa,+ mafuro erenje aoma;+ uye maitiro avo akaipa, uye kuva nesimba kwavo hakuna kururama. 11 “Nokuti muprofita nomupristi vasvibiswa.+ Ndakawanawo zvakaipa zvavo muimba yangu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 12 “Naizvozvo nzira yavo ichavaitira senzvimbo dzinotsvedza+ murima, dzavachasundirwa madziri vowa.”+ “Nokuti ndichavaunzira dambudziko, gore randichavafunga,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 13 “Ndakaona chinhu chisina kukodzera muvaprofita vokuSamariya.+ Vakaita sevaprofita vakamutswa naBhaari,+ uye vanoramba vachidzungairisa vanhu vangu, ivo vaIsraeri.+ 14 Ndakaona zvinhu zvinosemesa muvaprofita vomuJerusarema,+ kuita upombwe+ nokufamba munhema;+ uye vakasimbisa maoko evanoita zvakaipa kuti mumwe nomumwe arege kutendeuka+ pane zvakaipa zvake. Kwandiri vose zvavo vaita seSodhoma,+ uye vagari varo seGomora.”+ 15 Naizvozvo zvanzi naJehovha wemauto pamusoro pevaprofita: “Tarirai ndiri kuita kuti vadye muti unovava, uye ndichavapa mvura ine muchetura kuti vanwe.+ Nokuti kutsauka+ kwakabuda kuvaprofita vomuJerusarema kukaenda kunyika yose.” 16 Zvanzi naJehovha wemauto: “Musateerera mashoko evaprofita vari kukuprofitirai.+ Vari kuita kuti muve vasingabatsiri.+ Zvinoratidzwa nemwoyo yavo ndizvo zvavanotaura+—kwete zvinobva mumuromo maJehovha.+ 17 Vari kutaura vataurazve nevaya vasingandiremekedzi vachiti, ‘Jehovha ati: “Muchava norugare.”’+ Vakaudza vanhu vose vari kufamba mukuoma kwemwoyo yavo+ kuti, ‘Hapana dambudziko richakuwirai.’+ 18 Nokuti ndiani akamira muboka revanoshamwaridzana+ naJehovha kuti aone uye anzwe shoko rake?+ Ndiani akateerera shoko rake kuti arinzwe?+ 19 Tarirai! Dutu raJehovha, hasha, zvichabuda, kunyange mhepo yechamupupuri chine mvura.+ Ichatenderera pamisoro yevakaipa.+ 20 Kutsamwa kwaJehovha hakuzodzoki kusvikira apedza+ uye kusvikira aita kuti zvinofungwa nomwoyo wake zviitike.+ Mumazuva okupedzisira muchazvifunga muchinzwisisa.+ 21 “Handina kutuma vaprofita vacho, asi ivo vakamhanya. Handina kutaura navo, asi ivo vakaprofita.+ 22 Asi kudai vakanga vamira muboka revandinoshamwaridzana navo,+ vangadai vakaita kuti vanhu vangu vanzwe mashoko angu, uye vangadai vakaita kuti vatendeuke panzira yavo yakaipa uye pakuipa kwezvavanoita.”+ 23 “Ndiri Mwari ari pedyo,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “kwete Mwari ari kure here?”+ 24 “Kana kuti pane murume angavanda munzvimbo dzakavandika ini ndikasamuona here?”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ini handizadzi matenga nenyika here?”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 25 “Ndanzwa zvataurwa nevaprofita vari kuprofita nhema nezita rangu,+ vachiti, ‘Ndarota hope! Ndarota hope!’+ 26 Zvicharamba zviri mumwoyo yevaprofita vari kuprofita nhema asi vari vaprofita vokunyengera kwemwoyo yavo kusvikira rini?+ 27 Vari kufunga nezvokuita kuti vanhu vangu vakanganwe zita rangu nehope dzavo dzavanoramba vachirondedzera kune mumwe nomumwe,+ sokukanganwa kwakaita madzibaba avo zita rangu nokunamata Bhaari.+ 28 Muprofita ari kurota hope, ngaarondedzere hope dzacho; asi uya ane shoko rangu, ngaataure shoko rangu nechokwadi.”+ “Mashanga anei chokuita nezviyo?”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 29 “Shoko rangu harina kufanana nomoto here,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “uye nenyundo inoputsa ibwe?”+ 30 “Naizvozvo tarirai handiwirirani nevaprofita vacho,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “vaya vari kuba mashoko angu, mumwe nomumwe kushamwari yake.”+ 31 “Tarirai handiwirirani nevaprofita vacho,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “vaya vari kushandisa rurimi rwavo kuti vataure kuti, ‘Adaro!’”+ 32 “Tarirai handiwirirani nevaprofita vanorota zvenhema,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “vanozvirondedzera vodzungairisa vanhu vangu nokuda kwenhema+ dzavo uye nokuda kwokuzvirumbidza kwavo.”+ “Asi ini handina kuvatuma kana kuvarayira. Naizvozvo havazombobatsiri vanhu ava,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 33 “Vanhu ava kana muprofita kana mupristi pavanokubvunza, vachiti, ‘Mutoro waJehovha chii?’+ iwe utiwo kwavari, ‘“Ndimi—haiwa muri mutoro wakadini!+ Chokwadi ndichakusiyai,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.’ 34 Muprofita kana mupristi kana vanhu vanoti, ‘Mutoro waJehovha!’ Ndichafungawo nezvomurume iyeye uye nezveimba yake.+ 35 Mumwe nomumwe anoramba achiti kune mumwe wake uye mumwe nomumwe kuhama yake, ‘Jehovha apindura kutii? Uye Jehovha ataurei?’+ 36 Asi musataurazve nezvomutoro+ waJehovha, nokuti mutoro wacho unova shoko romumwe nomumwe,+ uye makachinja mashoko aMwari mupenyu,+ Jehovha wemauto, Mwari wedu. 37 “Uti kumuprofita wacho, ‘Jehovha akupindurei? Jehovha ataurei?+ 38 Zvino kana muchiramba muchitaura kuti “Mutoro waJehovha!” naizvozvo zvanzi naJehovha: “Nokuda kwokutaura kwenyu kuti, ‘Shoko iri ndiro mutoro waJehovha,’ pandakaramba ndichikutumirai shoko, ndichiti, ‘Musati: “Mutoro waJehovha!”’ 39 naizvozvo ndiri pano! Ndichakuregai zvachose,+ uye ndichakusiyai imi neguta randakakupai imi nemadzitateguru enyu—ndichakubvisai pamberi pangu.+ 40 Ndichaisa kuzvidzwa pamuri nokusingagumi uye kunyadziswa nokusingagumi, zvisingazokanganwiki.”’”+